4.14.20 Mmelite MCS COVID-19 – Schoolslọ akwụkwọ Mason City COVID-19 Isi
4.14.20 Mmelite MCS COVID-19
COVID-19 & Mmelite nke MCS / Site na Tracey Carson
Ezigbo Mason City Schoolslọ Akwụkwọ Mason City,
Ka anyị na-abanye n'ime izu nke abụọ zuru oke nke mmụta, anyị chọrọ ka streamline ọnụ ọgụgụ nke nkwukọrịta ị na-enweta. Pụrụ ịdabere na-anata District ozi ịntanetị na Tuesday na Friday, na onye isi akwụkwọ e-Newsletter na Sọnde.
Lelee ihe onyonyo a nke Mason Intermediate School, Mason Middle School na Mason High School orchestra na-anabata ndị egwu ha na ụlọ akwụkwọ nwere ọmarịcha One Bow Concerto.
N'okpuru ebe a bụ azịza nye ajụjụ ndị ezinụlọ anyị na ọha na eze na-ajụkarị.
You ka na-aga ọmụmụ ihe? Kedu ka anyị kwesịrị isi gwa ụlọ akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ na nwa anyị na-arịa ọrịa ma ọ bụ na ọ nweghị ike ịmecha ọrụ mmụta dịpụrụ adịpụ?
N'oge a iche, anyị na-elekwasị anya na-anọgide na-amụrụ mmụta na huu anyị na ụmụ akwụkwọ ’ọma. Ọbụna n'okpuru ọnọdụ ndị a tara akpụ, 99 pasent nke ụmụ akwụkwọ MCS tinyere ọrụ ime mmụta ha na izu gara aga. Anyị chọrọ inye nkwado, nduzi, na nhazi, mgbe anyị ka na-enye mgbanwe zuru oke iji kwado eziokwu nke ọnọdụ ọtụtụ n'ime anyị na-agagharị. Ọ bụrụ na nwa gị ma ọ bụ ezinụlọ gị na-arịa ọrịa ma ọ bụ ghara ịrụcha ọrụ mmụta dịpụrụ adịpụ, biko zitere onye nkuzi nwa gị ozi(s) na ụlọ akwụkwọ gị ọbịbịa nchịkwa nchịkwa:
MECC (akara ule PK-2): Luann Leetch, [email protected]
Mason elementrị (akara ule 3-4): Brenda haskamp, [email protected]
Nkịtị Mason (akara ule 5-6): Brenda haskamp, [email protected]
Asonlọ Akwụkwọ Etiti Mason (akara ule 7-8): Michelle Lienemann, [email protected]
Schoollọ akwụkwọ sekọndrị Mason (akara ule 9-12): Debbie Huff, [email protected]
Wifi anyị nwere ntụpọ. Enwere ebe ụfọdụ anyị nwere ike ịnweta wifi n'efu ma ka na-echekwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya?
Schoolslọ Akwụkwọ Mason City nwere mpaghara dị na ogige ụlọ akwụkwọ anyị ebe ị nwere ike ịnweta WIFI n'efu. Isi ihe dị na mpụga dị na ME / MI (n'akụkụ ụgbọala na-adọba ụgbọala nke kacha nso na chọọchị), MHS (n'ihu ebe a na-adọba ụgbọala n'akụkụ Z pod, mechie na ọnụ ụzọ ndị bịara), na MECC Access Point ga-adị n'ihu ụlọ ahụ na Thursday.
Na mgbakwunye, nke a bụ ndepụta nke Ebe Udo Na-ekpo ọkụ Ohio.
Enwetara m votu m na mail, mana ejighi m n'aka ihe m kwesiri ikwu maka ụdị ntuli aka ahụ, na ụbọchị mgbe ị na-ejuputa ya.
Mgbakọ Ohio General Assembly etinyewo atụmatụ nke ga-eme ka ndị Ohio niile nwee ike ịga n'ihu na-eme ntuli aka site na mail ruo Eprel 28. Mgbe ị natara ntuli aka gị mgbe ị rịọchara ya na Board of Elections, “Eledị ntuli aka” bụ Primary, na ị nwere ike họrọ Issues naanị, Otu ndọrọndọrọ ọchịchị (Okwu na akwukwo ndi otu ndoro ndoro ochichi obula nwere akwukwo ulo akwukwo Mason City 12 n'elu ha), Ọ dị mma ịnwa March 17 ma ọ bụ Eprel 28 dịka “ụbọchị ntuli aka.”
A ga-ezigharịrị votu gị site na 4/27 ma ọ bụ nyefere n'aka ndị Board of Elections dropbox site na 7:30pm na Eprel 28th, 520 Ikpe ziri ezi Dr., Lebanọn, OH 45036.
Kedụ ka anyị ga-esi kwado obodo anyị?
#CometCarryout: Nke a bụ oge dị oke mkpa maka azụmaahịa obodo anyị, ọ kachasị ndị ọbịa. Tụlee ịkwado azụmahịa anyị na ndepụta a.
Soro na Chamber nke emere ka rie Takeout Blitz ma hụ ọtụtụ ụlọ nri mpaghara ị nwere ike ịkwado. Na mgbakwunye, nye onyinye Joshua Ebe ma họrọ "Comet Carryout" ma ị nwere ike gọzie ezi-na-ụlọ nke nọ na mkpa site na nri site na otu azụmaahịa anyị.
MHS Na-alụ ọgụ Chama Aka
Ka anyị gbasaa ụfọdụ mmụọ Mason! Rụ ụmụ akwụkwọ nka nka niile, ndị okenye, a na-akpọkwa ndị obodo ọ bụla ka ha sonye na Mason Marching Band na-egwu egwu William Mason High School ọgụ!
Ebe ọ bụ na anyị enweghị ike ịrụkọ ọnụ ugbu a, anyị na-akpọ onye ọ bụla egwu egwu gị (tinyere ụda olu gị!) ma ọ bụ ihe ndekọ si na ihe owuwu ụzọ mbata gị na Fraịdee Eprel 17th, na 5 PM! Mbipụta nke egwu, na ndekọ, dị na www.masonbands.com
Were vidiyo ma ọ bụ foto iji kesaa mmụọ Mason gị ebe a MHS Na-alụ ọgụ Song Challenge Event Facebook page na Fraịdee!
Lelee mmelite ndị gara aga.
Nọrọ nke ọma!
Onye na-ahụ maka mgbasa ozi gbasara ọha
4.24.20 Mmelite MCS COVID-19
4.21.20 Mmelite MCS COVID-19
4.17.20 Mmelite MCS COVID-19
4.10.20 Isi edemede
COVID-19 & Mmelite nke MCS
Ozi General Ozi
Nwelite ndị ọrụ RLE
Mmelite teknụzụ maka ndị ọrụ